ကမ်းလှမ်းမှုကိုအားကစားဝတ်စုံ, အမျိုးသားများအတွက်အားကစား Jacket, တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. အားကစားတိုက်ရိုက် Tracksuits
Guangzhou LIDONG Garment Industrial Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Distributor/Wholesaler , Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Middle East , Americas , East Europe , Oceania , West Europe ထုတ်ကုန်:21% - 30% ဖေါ်ပြချက်:အားကစားဝတ်စုံ,အမျိုးသားများအတွက်အားကစား Jacket,အားကစားတိုက်ရိုက် Tracksuits,အမျိုးသားများအတွက်အားကစားအဝတ်အထည်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Tracksuit စီးရီး > ဝက်ဇစ်အားကစားဝတ်စုံ
ဝက်ဇစ်အားကစားဝတ်စုံ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, အားကစားဝတ်စုံ, အမျိုးသားများအတွက်အားကစား Jacket ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အားကစားတိုက်ရိုက် Tracksuits R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Long ကစွပ်အိတ်ဒီဇိုင်း Multi-အရောင် tracksuit
Mens Half-zip လက်ရှည်ဆွယ်တာအင်္ကျီ Jogger Casual Jacket & Pants လိင်: အရွယ်ရောက်ပြီးသူ / ကလေးများ ပစ္စည်း: 100% polyester အရောင်: အနက်ရောင် / အနီရောင်၊ အနက်ရောင် / လိမ္မော်ရောင်၊ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ ရေတပ် အရွယ်အစား: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ) 26,28,30,32 (ကလေးများ) MOQ: 10 စုံ OEM:...
blank တစ်ဝက်ဇစ် tracksuit ကျား: လူကြီး / လေးတွေ ပစ္စည်း: 100% polyester အရောင်: luorescent လိမ္မော်ရောင်, f, အလင်းပြန်မှုအစိမ်း, အနက်ရောင် Size: M က, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (လူကြီး) 26,28,30,32 (ကလေးများ) MOQ: 10 အစုံ OEM: သင်၏လိုဂို print ထုတ်မှလက်ခံခဲ့သည် Training&Jogging Tracksuit for Adults Size Chart Apart...
မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ဝက်ဇစ် tracksuit ကျား: လူကြီး / လေးတွေ ပစ္စည်း: 100% polyester အရောင်: အလင်းပြန်မှုအစိမ်း, အပြာ, luorescent လိမ္မော်ရောင်, f, ရေတပ်, အနီ Size: M က, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (လူကြီး) 26,28,30,32 (ကလေးများ) MOQ: 10 အစုံ OEM: သင်၏လိုဂို print ထုတ်မှလက်ခံခဲ့သည် Training&Jogging Tracksuit for...
Long ကစွပ်အိတ်ဒီဇိုင်း Multi-အရောင် tracksuit ကျား: လူကြီး / လေးတွေ ပစ္စည်း: 100% polyester အရောင်: အနက်ရောင်အစိမ်းရောင်,fluorescent နှင့်အတူအပြာ, အဝါနှင့်အတူအပြာ, အပြာနှင့်အတူရေတပ်နှင့်အတူအလင်းပြန်မှုအစိမ်းရောင် Size: M က, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (လူကြီး) 26,28,30,32 (ကလေးများ) MOQ: 10 အစုံ OEM: သင်၏လိုဂို print...
ဘောင်းဘီရှည်နှင့်အတူနယူးဝက် tracksuit ကျား: လူကြီး / လေးတွေ ပစ္စည်း: 100% polyester အရောင်: အနီ, အနီ, အပြာ, အစိမ်း,fluorescent နှင့်အတူအနက်ရောင်နှင့်အတူအနက်ရောင်အလင်းပြန်မှုအစိမ်းရောင်, Size: M က, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (လူကြီး) 26,28,30,32 (ကလေးများ) MOQ: 10 အစုံ OEM: သင်၏လိုဂို print ထုတ်မှလက်ခံခဲ့သည်...
တရုတ်နိုင်ငံ ဝက်ဇစ်အားကစားဝတ်စုံ ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် ဝက်ဇစ်အားကစားဝတ်စုံ အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ အားကစားဝတ်စုံ,အမျိုးသားများအတွက်အားကစား Jacket,အားကစားတိုက်ရိုက် Tracksuits,အမျိုးသားများအတွက်အားကစားအဝတ်အထည်,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် ဝက်ဇစ်အားကစားဝတ်စုံ ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ ဝက်ဇစ်အားကစားဝတ်စုံ အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် အားကစားဝတ်စုံ,အမျိုးသားများအတွက်အားကစား Jacket,အားကစားတိုက်ရိုက် Tracksuits,အမျိုးသားများအတွက်အားကစားအဝတ်အထည်,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ ဝက်ဇစ်အားကစားဝတ်စုံ အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
အားကစား Track ဝတ်စုံ
အားကစားဝတ်စုံ အမျိုးသားများအတွက်အားကစား Jacket အားကစားတိုက်ရိုက် Tracksuits အမျိုးသားများအတွက်အားကစားအဝတ်အထည် အားကစား Track ဝတ်စုံ